ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုကို မောင်းနှင်နေသော MarTech လမ်းကြောင်းများ | Martech Zone
မားကတ်တင်း ကျွမ်းကျင်သူ အတော်များများ သိကြသည်- လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်အတွင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာများ (Martech) သည် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ဤတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်သည် နှေးကွေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့၊ နောက်ဆုံး 2020 လေ့လာမှုက ပြီးသွားပါပြီ။ စျေးကွက်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကိရိယာ 8000. စျေးကွက်ရှာဖွေသူအများစုသည် သတ်မှတ်ထားသောနေ့တွင် ကိရိယာငါးခုထက်ပို၍ အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် စုစုပေါင်း 20 ကျော်ရှိသည်။
Martech ပလပ်ဖောင်းများသည် သင့်လုပ်ငန်းအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြန်လည်ရယူရန်နှင့် ဝယ်ယူမှုခရီးကို အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ အသိဥာဏ်တိုးပွားခြင်းနှင့် ရယူခြင်းနှင့် ဝယ်ယူသူတိုင်း၏ အလုံးစုံတန်ဖိုးကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်သိသိသာသာတိုးလာစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
ကုမ္ပဏီများ၏ 60% သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်း ROI ကို နှစ်ဆတိုးရန် 2022 ခုနှစ်တွင် MarTech တွင် ၎င်းတို့၏အသုံးစရိတ်ကို တိုးမြှင့်လိုကြသည်။
2021 အတွက် ထိပ်တန်း Martech Trends မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
စျေးကွက်ရှာဖွေသူ 77% ကထင်သည်။ MarTech သည် ROI တိုးတက်မှုအတွက် တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီတိုင်း ချမှတ်သင့်သည့် အရေးကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကန်သော MarTech ကိရိယာများကို ရွေးချယ်ရန် ဖြစ်သည်။
လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, Martech ကို ဗျူဟာမြောက် အသုံးပြုသူအဖြစ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ခေတ်ရေစီးကြောင်း ၅ ခုကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ ဤလမ်းကြောင်းများသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်းတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ယနေ့၏ မတည်မငြိမ်ဖြစ်သော COVID-5 ကပ်ရောဂါလွန် စီးပွားရေးအခြေအနေတွင် စျေးကွက်တွင် သင်၏ရပ်တည်ချက်ကို မည်သို့တိုးတက်စေနိုင်မည်နည်း။
လမ်းကြောင်း 1- ဥာဏ်ရည်တုနှင့် စက်သင်ယူခြင်း။
နည်းပညာက ရပ်မနေပါဘူး။ ဉာဏ်ရည်တု (AI) အားလုံးထဲမှာ နံပါတ်တစ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်း. သင်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စားသုံးသူများကို ပစ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်စေ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ရှာဖွေနေပြီး နည်းပညာတိုးတက်မှုများကို နှစ်သက်ကြသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏ 72% သည် AI ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုးတက်စေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ပြီးတော့ 2021 ခုနှစ်အထိ ကုမ္ပဏီတွေက သုံးစွဲနေကြပါပြီ။ ထက်ပိုမို $ 55 ဘီလီယံအထိ ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြေရှင်းချက်များ၏အတုထောက်လှမ်းရေးအပေါ်။ ဒီအရေအတွက်ဟာ ၂ ဘီလီယံအထိ တိုးလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင် AI နှင့် ML သည် အွန်လိုင်းပရောဂျက်အားလုံးအတွက် အဓိကအားသာချက်နှစ်ခုရှိသည်။
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ပိုမိုထိရောက်သော ဖြေရှင်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေကို သေချာစေနိုင်ပါတယ်။
Instagram၊ YouTube နှင့် Netflix အပါအဝင် အဓိက မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည် AI နှင့် Machine Learning ကို အကောင်အထည်ဖော်နေသည် (ML) သုံးစွဲသူအာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခြေအရှိဆုံး အကြောင်းအရာများကို ဖော်ထုတ်တင်ပြရန် အယ်လဂိုရီသမ်များ။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ chatbots ကဲ့သို့သော ML လမ်းကြောင်းသည် အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်များကြားတွင် အကြွင်းမဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အရှိန်မြှင့်တိုးတက်မှု၏နောက်ထပ်နယ်ပယ်မှာ AI-မောင်းနှင်သည့် chatbots ဖြစ်သည်။ chatbot သည် သင့်အဆက်အသွယ်များကို သိသိသာသာချဲ့ထွင်နိုင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဖောက်သည်များထံမှ အဖိုးတန်ဒေတာများကို စုဆောင်းကာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ၊ ဧည့်သည်များထံ သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းမျိုးစုံမေးကာ ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ပရိုမိုးရှင်းများကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ စားသုံးသူများ၏ 69% ကျော်သည် chatbots မှတစ်ဆင့် အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။. Chatbots များသည် သုံးစွဲသူများကို ဆွဲဆောင်ပြီး ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည် - +25% ဝင်ရောက်မှုမှ ရလဒ်နှစ်ဆအထိ ၀ယ်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မှုနှင့်အတူ။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ - ငွေစုလိုသောဆန္ဒဖြင့် - chatbots များကို အသုံးမပြုခဲ့ကြပါ... အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော ပရိတ်သတ်ကို လက်လွတ်မခံပါ။ chatbots များ ထိရောက်စေရန်အတွက်၊ ၎င်းတို့သည် နှောက်ယှက်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလွန်ထက်သန်သော chatbot နည်းဗျူဟာကို အသုံးချသော ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ပြိုင်ဘက်များထံ တွန်းပို့ကြသည်။ သင်၏ chatbot ဗျူဟာကို ဂရုတစိုက်အသုံးချပြီး စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်။
လမ်းကြောင်း 2- ဒေတာ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသော ဒုတိယမြောက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ တိကျသောသုတေသနနှင့် တိုင်းတာခြင်းများသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်စနစ်များမှ အရေးကြီးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဆော့ဖ်ဝဲကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုလာကြသည်။ ပျဉ်ပြား, မွေးဖွားသည်။နှင့် ClearStory မှ:
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော ဒက်ရှ်ဘုတ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
သက်ရောက်မှုရှိသော အစီရင်ခံမှုကို တည်ဆောက်ပါ။
ဤအဆင့်မြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များသည် ကော်ပိုရိတ်ဗျူဟာကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး ပိုမိုသက်ဆိုင်မှုရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတွင် အလွန်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီများကို များစွာအားစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဒေတာကို ရယူနိုင်သည်။ တိကျသောပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီများသည် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန် ဒေတာစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့် လူသားအချက်အကြောင်း မမေ့ပါနှင့်။ ၎င်းတို့၏နယ်ပယ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရရှိသော အချက်အလက်ကို အသုံးပြုသင့်သည်။
Trend 3- Business Intelligence
စီးပွားရေးအသိဥာဏ် (BI) သည် လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး ဖြစ်ထွန်းသောဖြေရှင်းချက်များအား အသုံးချမှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် ဒေတာစုဆောင်းခွင့်ပြုသည့် အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာများ၏ စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံး၏ ထက်ဝက်နီးပါးသည် ၎င်းတို့၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်ကို အသုံးပြုကြသည်။
BI လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုသည် 27 ခုနှစ်တွင် 2021% သို့ ခုန်တက်သွားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများ၏ 46% ကျော်သည် BI စနစ်များကို အားကောင်းသည့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြသည်ဟု ကုမ္ပဏီများ၏ 2021% ကျော်က ပြောကြားသောကြောင့် ဤတိုးတက်မှုသည် ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်။ 10 ခုနှစ်တွင် ဝန်ထမ်း 200 မှ 19 အထိရှိသော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည် COVID-XNUMX ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရှင်သန်ရန်နည်းလမ်းအဖြစ် BI သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းက လုပ်ငန်းအားလုံးကြားတွင် Business Intelligence ၏ ရေပန်းစားမှုကို ရှင်းပြသည်။ ဤတာဝန်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် programming ကျွမ်းကျင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ 2021 ရှိ BI ဆော့ဖ်ဝဲတွင် အောက်ပါကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်-
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမလိုအပ်သော ပေါင်းစည်းမှုကို ဆွဲယူ၍ချပါ။
Built-in Intelligence နှင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်
လျင်မြန်သော သဘာဝဘာသာစကား လုပ်ဆောင်ခြင်း (NLP)
လုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကြား အဓိကကွာခြားချက်မှာ တိကျသောစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းက သင့်အား ဒေတာများကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအဖြစ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်စေပါသည်။
Trend 4- Big Data
Big data သည် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းထက် အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းအတွက် ပိုမိုပြည့်စုံသော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေတာကြီးကြီးမားမားနှင့် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကြား အဓိကကွာခြားချက်မှာ သမားရိုးကျဆော့ဖ်ဝဲလ်မလုပ်ဆောင်နိုင်သော ရှုပ်ထွေးသောဒေတာအစုတစ်ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေတာကြီးကြီးမားမား၏ အဓိကအားသာချက်မှာ အနာဂတ်တွင် အောင်မြင်လာစေရန် ၎င်းတို့ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်သင့်သည် သို့မဟုတ် ပိုမိုရင်းနှီးမြုပ်နှံသင့်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ နာကျင်မှုအချက်များကို ညွှန်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဒေတာကြီးကြီးမားမားအသုံးပြုသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ 81% သည် အပြုသဘောဆောင်သော ဦးတည်ချက်တွင် သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများကို ညွှန်ပြနေသည်။
Big Data သည် ဤကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော ကုမ္ပဏီများ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်-
စျေးကွက်ရှိ ဖောက်သည်များ၏ အပြုအမူကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်အောင် ဖန်တီးခြင်း။
စက်မှုလုပ်ငန်းဗျူဟာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ ဖော်ဆောင်ခြင်း။
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြင့်စေသော အသုံးဝင်သောကိရိယာများကို နားလည်သဘောပေါက်ပါ။
စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဂုဏ်သိက္ခာကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
သို့သော် ကြီးမားသောဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စျေးကွက်တွင်ကြီးမားသောဒေတာအမျိုးအစားနှစ်ခုကြားတွင်ရွေးချယ်သင့်သည်-
Hadoop၊ Atlas.ti၊ HPCC၊ Plotly ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များတွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် PC-based software
Skytree၊ Xplenty၊ Azure HDInsight ကဲ့သို့သော cloud ရှိ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ထိရောက်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို တွက်ချက်ရန်အတွက် Cloud-based software
အကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ကြီးကြီးမားမားရက်စွဲကြီးတစ်ခုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ် မည်ကဲ့သို့ ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက နားလည်ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီ။ ထင်ရှားသော ဥပမာတစ်ခုမှာ ထိရောက်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဒေတာကြီးကြီးမားမားအကူအညီဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် သက်သာသော streaming ဧရာမ Netflix ဖြစ်သည်။
လမ်းကြောင်း 5- မိုဘိုင်း-ပထမချဉ်းကပ်မှု
မိုဘိုင်းဖုန်းမရှိရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကို စိတ်ကူးယဉ်လို့ မရပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည် စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများကို အမြဲဂရုမစိုက်ကြပါ။ 2015 ခုနှစ်တွင် Google သည် ဝဘ်ဆိုဒ်များ၏ မိုဘိုင်းဗားရှင်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် မိုဘိုင်းလ်-ပထမ အယ်လဂိုရီသမ်များကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ခေတ်သစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ပုံဖော်ခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်သော ဝဘ်ဆိုက်မရှိသော လုပ်ငန်းများသည် မိုဘိုင်းရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် မြင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါ။
2021 ခုနှစ် မတ်လတွင်၊ မိုဘိုင်းပစ္စည်းများအတွက် Google အညွှန်းကိန်း၏ နောက်ဆုံးအဆင့်သည် အပြည့်အဝအသက်ဝင်လာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့် မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုအတွက် ဝဘ်ဆိုက်များကို မိတ်ဆက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များ၏ 60% ခန့် အဆင်မပြေသော မိုဘိုင်းဗားရှင်းဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်များသို့ မပြန်ပါနှင့်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ဗားရှင်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများ၏ 60% သည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
အသုံးပြုရာတွင် မိုဘိုင်း-ပထမလမ်းကြောင်းများသည် ML၊ AL၊ နှင့် NLP တို့နှင့် ရောယှက်သည်။ အသံရှာဖွေမှု. လူများသည် ၎င်း၏တိကျမှုနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းကြောင့် အချို့သောထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန် အသံရှာဖွေမှုများကို လျင်မြန်စွာမွေးစားကြသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူများ၏ 27% ကျော်သည် ၎င်းတို့၏ စက်များတွင် အသံဖြင့် ရှာဖွေမှုကို အသုံးပြုကြသည်။ Gartner သည် 30 ခုနှစ်အကုန်တွင် အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုအားလုံး၏ 2020% တွင် အသံရှာဖွေမှုပါဝင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် စာရိုက်ရန်အတွက် အသံရှာဖွေမှုကို ပိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်ဝဘ်နှင့် မိုဘိုင်းဗားရှင်းများတွင် အသံရှာဖွေမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် 2021 နှင့် ၎င်းထက်ပို၍ ကောင်းမွန်သောစိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်။
မားကတ်တင်းနည်းပညာအကြောင်း သင်သိလိုသမျှ Scalers
သင်၏ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို စီစဉ်နေသည်...
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာသည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ မတူညီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထွန်းကားလာစေရန်၊ သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ဘက်သို့ ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များနှင့် ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ ဤအဓိက martech ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ဂရုပြုခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့နှင့် ကိုက်ညီမည့်အရာကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့ကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် ဤလမ်းကြောင်းများကို ဦးစားပေးသင့်သည်-
အရည်အချင်း ပြည့်ဝမှုနှင့် ဝန်ထမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ကုမ္ပဏီများသည် သက်သေပြထားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Tags: aianalyticsဉာဏ်ရည်တုကြီးမားတဲ့ data တွေကိုမွေးနေ့ပျဉ်ပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးchatbotsကျောက်တုံး.ရာဝတီဒေတာ analyticsဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းgoogleစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းmartechmartech ခေတ်ရေစီးကြောင်းများမိုဘိုင်းရှာဖွေမှုမိုဘိုင်း - ပထမဆုံးသဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့nlpအသံရှာဖွေမှု